Vision6 integrates Eventbrite maka akwụkwọ ịkpọ òkù na Ọbịa-List Management | Martech Zone
Vision6 enwere mmekorita ohuru na ihe omuma ihe omuma ihe omume, Emecha, maka ndị ahịa iji jikwaa akwụkwọ ịkpọ òkù ha na nkwukọrịta mmemme. Ikpo okwu na-enye gị ohere ịme:
Mepụta akwụkwọ ịkpọ òkù - Mepụta ọmarịcha akwụkwọ mmemme ahaziri iche nke ahapụrụ ndị ọbịa gị nke ọma.
Mekọrịta Ọbịa - Gị omume ọbịa ndepụta syncs kpọmkwem site Eventbrite-eme ka ọ dị mfe ikwurịta okwu na bụla ogbo.
Machiini - Tọọ usoro iji jikwaa ndenye aha, ihe ncheta na ntinye ihe omume.
Site syncing bịara data, ọ bụ nnọọ mfe jikwaa ma ọbịa registrations na omume nkwukọrịta. Vision6 na-enyere ndị ahịa aka ịkwụsị ihe omume ha na ndebiri ọkpụkpọ pụrụ iche zuru oke maka oge ọ bụla. Site na ọtụtụ ndebiri mara mma ịhọrọ, ndị ahịa nwere ike izipu akwụkwọ ịkpọ oku dị elu na nkeji. Onye editọ drag-na-dobe ahụ na-eme ka ọ dị mfe ịmepụta akwụkwọ ịkpọ oku ọkachamara na nkeji, ọbụlagodi maka ndị mbido.
Mgbe ịmechara ihe omume na Eventbrite, ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ihe omume nọ n'ọrụ ozugbo na menu ndepụta na Vision6. Ọbịa nkọwa na-akpaghị aka na-ada na ozugbo na syncing na-esochi mgbanwe na ọhụrụ registrations ka ha na-eme. Iziga nkwukọrịta mmemme nke oge zuru oke dịka nkwenye, ncheta na nkọwapụta nke mmemme bụ ikuku.
Enwere m ịhụnanya na ntinye ọhụrụ. Dị ka a ọkachamara omume planner, ọ mere ndụ m nke ukwuu mfe. Enweghị m ike inwe obi ụtọ karịa! Lisa Renneisen, ngalaba-nchoputa nke Nzukọ Na-egbuke egbuke
Site na ijikọta tiketi na ịkọ akụkọ na metrik, ndị ahịa nwere ike ịnakọta nzipu nzaghachi post-event na imebi ndekọ ọhụrụ n'afọ ọzọ. Ndị na-eme ihe omume na ndị ahịa nwere ike ilekwasị anya na ihe kachasị mkpa - na-eke ihe omume echefu echefu n'ezie.
Ndị ahịa na-arịọ anyị ka anyị tinye njikwa ihe omume n'ime ngwakọta ogologo oge. Obi dị anyị ezigbo ụtọ isoro onye isi ụlọ ọrụ dịka Eventbrite soro ndị ahịa anyị were ihe omume ha n'ọkwa ọzọ. Mathew Myers, onye isi Vision6
Gaa Leta Vision6's Eventbrite Peeji
Tags: nkwurịta okwu mmemmeemail mmemmeomume ọbịa ndepụtammemme tiketiihe omumeihenjikwa ndepụta ndị ọbịasms iheọhụụ 6
PaveAI: Onye mechara chọta azịza ya na nchịkọta Google!